Aarôna - Wikipedia
I Aarôna na Aharôna na Arona dia olona resahina ao amin’ ny Baiboly, indrindra ao amin’ ny Testamenta Taloha ao amin’ ny Bokin’ny Eksodosy sy ny Levitikosy ary ny Nomery. Nanampy an’ i Mosesy (na Môizy) tamin’ ny fanafahana ny Zanak’i Israely tamin’ ny fanadevozan’ ny Egiptiana izy. Izy no mpisorombe voalohany ao amin’ ny fivavahana jiosy sady mpanorina ny raharahan’ ny mpisorona teo amin’ ny Hebreo. Nanan-janaka an’ i Nadaba sy i Abiho sy i Eleazara ary i Itamara tamin’i Eliseba (na Elizabeta) vadiny izy. I Arona dia zanak’i Amrama sy i Iokebeda, izany hoe taranak’i Levy. Rahalahin’i Mosesy sy i Miriama izy. Atao hoe אַהֲרֹן / Aharone io anarana io amin’ny teny hebreo fa Ἀαρών / Aarôn kosa amin’ny teny grika.
I Aarona, natain'i Henry Schile, taona1874
Nandray anjara tamin’ny fanatanterahana ny fahagagana nampanaovin’Andriamanitra azy sy i Mosesy teo anatrehan’ny Egiptiana izy. Isan’izany fahagagana izany ny niovan’ny tehiny ho menarana teo anatrehan’ny Farao. Satria i Mosesy tsy havanana tamin’ny fitenenana dia izy no nanampy azy amin’ny fitondrana teny raha nifampiresaka tamin’ny Farao izy ireo ny amin’ny tokony hanafahana ny Zanak’i Israely amin’ny fanandevozana. I Arona sy i Mosesy no namoaka ny Zanak’i Israely avy tao Egipta.
I Mosesy sy i Arona eo anatrehan'ny Farao, nataon'i Benjamin West
Navelan’i Mosesy tamin’i Arona ny Zanak’i Israely tamin’ny niakarany tany an-tendrombohitra Sinay niaraka amin’i Josoa (na Jôsoe) mba haka ny vatofisaka nisy ny Didy Folo. Nefa i Arona, rehefa norahonan’ny vahoaka dia nanamboatra famantarana hita maso an’Andriamanitra, dia ny ombilahy kely volamena (Eks. 32.1-24) izay nahatezitra an’Andriamanitra taminy satria fanompoan-tsampy izany.
Araka ny Baiboly dia Arona no mpisorombe voalohany. Maty teo akainkin’ny sisin-tanin’i Kanana i Arona tamin’ny faha-123 taonany satria tsy natoky ny herin’Andriamanitra. Nandimby azy avy eo i Eleazara zanany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Aarôna&oldid=999978"
Dernière modification le 6 Janoary 2021, à 11:39
Voaova farany tamin'ny 6 Janoary 2021 amin'ny 11:39 ity pejy ity.